बढीभन्दा बढी गुगल रिभ्यु पाउन यसो गर्नुहोस् - Tech News Nepal Tech News Nepal
२०७८, ५ आश्विन मंगलबार |
बहुप्रतिक्षित सामसङ ग्यालेक्सी ए५२एस नेपाली बजारमा, कति होला
ट्राफिक कारबाहीमा पर्नु भयो ? यसरी ट्रयाक गर्नुहोस्
आईओएस १५ सँगै आईफोनमा आएका १९ नयाँ फिचर,
अब स्थानीय तहको एपबाटै कर तिर्न मिल्ने, यी
आईओएस १५ सार्वजनिक, यसरी गर्नुहोस् अपडेट
अब आईफोन थर्टिन किन्ने कि आईफोन ट्वेल्भमै चित्त
प्रकाशको किरणबाट उच्च गतिको इन्टरनेट दिन सुरू
गोप्रो हिरो टेन ब्ल्याक क्यामेरा नेपाली बजारमा, कति
नेपाली बजारमा भोलि सार्वजनिक हुँदै रेड्मी १० प्राइम
नेपालीले प्रयोग गर्ने ५ झुर पासवर्ड, कतै तपाईंको
सौर्य आँधीका कारण महिनौंसम्म इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने
अनलाइनबाट कसरी ब्लुबुक नवीकरण गर्ने ?
फोटोशप सिक्न चाहनेका लागि ५ दिने निःशुल्क अनलाइन
अन्ततः भोलि सार्वजनिक हुने भयो टेलिकमको ‘नमस्ते पे’
बढीभन्दा बढी गुगल रिभ्यु पाउन यसो गर्नुहोस्
आइतबार, चैत्र २२, २०७७
काठमाडौं । एक समय थियो, मानिसहरु फोनबुक पल्टाउँथे र स्थानीय क्षेत्रमा भएका व्यवसायहरुको खोजी गर्दथे । अनि कम्पनीहरू ग्राहककाे घरघरमा गएर आफ्नो व्यवसाय र ब्राण्डको जानकारी दिने गर्थे । तर त्यो समय गएको निकै समय भइसक्यो ।
आईओएस १५ सँगै आईफोनमा आएका १९ नयाँ फिचर, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
काठमाडौं । एप्पलले सोमबार मात्रै आईओएस १५ को फाइनल भर्सन डाउनलोडका लागि उपलब्ध गराएको छ
ट्राफिक कारबाहीमा पर्नु भयो ? यसरी ट्रयाक गर्नुहोस् आफ्नो कागजात
काठमाडौं । यदि ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईंको सवारी साधनको
ह्याकरबाट यसरी जोगाउनुहोस् आफ्नो कम्प्युटर
काठमाडौं । अहिलेको समयमा इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग आम मानिसको दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा
विण्डोज टेनमा कुन होला सबैभन्दा फास्ट वेब ब्राउजर ?
काठमाडौं । तपाईंको कम्प्युटरमा हुने महत्वपूर्ण प्रोग्राममध्ये एक ‘वेब ब्राउजर’ हो । इन्टरनेट अर्थात् वर्ल्ड
बहुप्रतिक्षित सामसङ ग्यालेक्सी ए५२एस नेपाली बजारमा, कति होला मूल्य ?
गोप्रो हिरो टेन ब्ल्याक क्यामेरा नेपाली बजारमा, कति होला मूल्य ?
अब आईफोन थर्टिन किन्ने कि आईफोन ट्वेल्भमै चित्त बुझाउने ?
हाई स्पिड कनेक्सन हुँदा समेत किन स्लो हुन्छ इन्टरनेट ?
केन्याका प्रयोगकर्ताले नेटफ्लिक्स निःशुल्क हेर्न पाउने
अनर ब्राण्डलाई लिएर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीबीच विवाद
पुराना एन्ड्रोइड भर्सनमा महत्वपूर्ण फिचर ल्याउँदै गुगल
दशैंको मुखमा बजारमा मोबाइल अभाव